Mapisarema 150 Zvinoreva Vhesi Ndima | MINYENGETERO MARI
musha Uncategorized Mapisarema 150 Zvinoreva Ndima Ndima
Mapisarema 150 Zvinoreva Ndima Ndima
Nhasi tichave tichidzidza pisarema 150, zvichireva kuti ndima imwe neimwe. Mapisarema 150 ndiyo zana nemakumi mashanu negumi rekupedzisira Bhuku reMapisarema, inowanzozivikanwa muChirungu nevhesi yayo yekutanga, muKing James Version, "Rumbidzai ISHE". Rumbidzai Mwari munzvimbo yake tsvene ”. Bhuku reMapisarema chikamu chechitatu cheBhaibheri rechiHebheru uye bhuku reChristian Old Testament. MuchiLatin, inozivikanwa se "Laudate Dominum in sanctis eius" Izvi zvinopa mazita mapfumbamwe ezviridzwa zvekushandisa kurumbidza Mwari. Nepo kushandurwa chaiko kwezvimwe zvezviridzwa izvi kusingazivikanwe, zvimwe zvezviridzwa zvinozivikanwa ndeye shofar, rudimbwa, rudimbwa, ngoma, chiridzwa, nyere, makandira uye hwamanda. Zvinoonekwa kuti hunyanzvi hwevanhu hunoshandiswa mukugadzira mimhanzi kubva pazviridzwa izvi: “Mhepo inoshandiswa pakuridza hwamanda; zvigunwe zvinoshandiswa pakurova tambo dzembira nembira; ruoko rwose rwunoshanda mukurova gandira; tsoka dzinofamba mukutamba ”.
Kudana Kurumbidza Mwari Nziyo Zvekuimba, munyori wepisarema anokurudzira ungano kurumbidza Mwari nemumhanzi nekutamba, yakatumidzwa mhando pfumbamwe dzezviridzwa zvinoshandiswa kushandiswa mukurumbidza Mwari. Izvi zvinopfuura kudana kumutendi wega wega, it is mandate kuti Mwari uyo murume wese anofanira kuuya mukunzwisisa kuti Mwari anodeedza chibereko chedu chekutenda muminiti yega yega, mamiriro uye chinzvimbo, nekudaro, uku ndiko kuda kwaMwari kwatinofanira kuita kuomerera ku.
Mapisarema 150 zvinoreva vhesi neVesi
Ndima 1: Rumbidzai Ishe. Rumbidzai Mwari munzvimbo yake tsvene: Murumbidzei munzvimbo dzesimba rake.
Iyi ndima inotsanangura izvo, kupi uye sei murume kwaanofanira kuitira Mwari nguva dzose, ichipa chirevo chekuti munhu haafanire kungozviita, asi panodiwa izvo zvinofanirwa kupihwa zvinoenderana nemunyori wepisarema. Zvatinofanirwa kuita kureva kuratidza nekuzivisa kunaka kwaMwari kuvanhu, nekuti izvi zvinofanirwa kunge zviri izvo zvinoita wekudenga achiitira Mwari nguva dzose, mutendi wese anofanira kupa rumbidzo kuna Mwari mune ese mamiriro. Kurumbidzwa kunofanira kupihwa kuna Mwari, sekutaurwa kwazvinoitwa muPisarema, kurumbidzwa nekutenda kunofanirwa kunge kuri kupa munzvimbo yake tsvene inova moyo wedu nekuti moyo wedu ndiwo wepakati uye hunhu hunobatanidza muviri, mweya, uye mweya, sosi yeruzivo iyo inoitika yepanyama neyepamweya panguva yekudyidzana kwemunhu uyu kureva kuti chii chakaumbwa nemunhu, ndosaka Jesu muchirevo chake akataura kuti avo vachanamata Mwari vanofanira kunamata muchokwadi nemweya, saka, moyo yedu ndiyo nzvimbo yepamusoro yekudyidzana pakati peMunhu naMwari. Mashandisiro ekutaura muchirevo ichi "murumbidzei munzvimbo yesimba rake" zvichireva, kurumbidza kudenga, kwake kwakasimba uye nhare, izvo zvinoreva kuti Kutenda kunofanirwa kunge kuri kupa kuburikidza nekunzwisisa kwemakomborero asingaverengeke aMwari anoratidza muhupenyu hwedu.
Ndima 2: Murumbidzei nekuda kwemabasa ake esimba; murumbidzei maererano nehukuru hwake.
Izvi zvinotsanangura chiitiko chinoshamisa chinoratidza pamberi, ikozvino nekusingaperi chinopa kuratidzwa kwesimba raMwari, simba, hukuru uye simba, kutendeka kwaMwari mumakore ese, kunyangwe muhupenyu hwezuva nezuva, dhizaini uye kuratidzwa kwaMwari kubwinya mune zvese zvaari zvaita, shanduko dzinoenderera dzinoitika mazuva ese.
Ndima 3: Murumbidzei nekurira kwehwamanda: murumbidzei nemitengeramwa nembira.
Iyi vhesi yerugwaro inoshevedza kutarisa kwekushandiswa kwechimbo chinoburitsa ruzha kurumbidza, kuvhenekera uye kutipa pfungwa yekuti chero chinhu chinogadzira ruzha chine kutaurirana kusinganzwisisiki uye nerukudzo zvavanoburitsa izvo zvinogona kumutsa mweya uye kusimbisa chikamu chemuviri wese kurumbidza Mwari uye zvakare kupa kuratidzwa kwekubata kunoshamisa kwaMwari nevanhu, zvinobatsira mutendi kuti ape zvese zvakasikwa kukudza Mwari kupfuura zviitwa zvemuviri kana zviito.
Ndima 4 ne5: Murumbidzei nengoma yengoma nokutamba: Murumbidzei nezviridzwa zvine tambo. Murumbidzei pamusoro pamakandira anorira kwazvo; Murumbidzei pamakandira anorira kwazvo.
Ndima iyi haingotsanangure chete zvishandiso zvekurumbidza Mwari asi zvine chekuita nekushandisa zvipo, Mwari zvaakapa kumurume wese izvo zivo, kunzwisisa, huchenjeri nehunyanzvi hwakawanda hunoda mukushanda kwezviridzwa izvi zvinotaurwa, hazvo, zvinoreva pamweya. inozivikanwa kuna Mwari, uyezve, chirevo chemuviri hachigone kuregeredzwa, mweya wekumutsidzira wechiridzwa mumamiriro asina kunaka uye nedambudziko, ndoda Mwari, vanoziva chikonzero nei vachipa munhu kurudziro yekugadzira nekugadzira izvi zviridzwa, izvi zviridzwa zvemimhanzi iko kuedza kweanonyengera mutambi, zvakamanikidza kuti munhu achinje mamiriro emoyo wake achiziva uye asingazive. Kutamba kunosanganisira kusimba uye kuenderera kwekufamba kwemuviri uye nekubatana kwepfungwa kunogona kuita muviri pasi pekutonga kwepfungwa. Kana zvese zvichisanganisira kubatanidzwa kwese kwemuviri, mweya uye mweya mukurumbidza Mwari, zvinogona kutibatsira kuti Mwari vafare kwatiri.
Ndima 6: Zvinhu zvese zvinofema, ngazvirumbidze Ishe. Rumbidzai Ishe.
Ndima iyi inotsanangura zvirevo zvese zvePisarema iri, iro izwi: Mweya yese [rumbidzai Mwari] ”,“ Rega mweya wese [rumbidzai Mwari], zvinoreva mweya wega wega munhu waanotora, anofanira kurumbidza Mwari, zvese zvinoitwa nemunhu rumbidzwa, Mwari haasi kungotarisira kurumbidzwa mumuromo medu, Anoda zvakakwana, zvinoreva kuti, zvese zvatinoita uye zvatinazvo zvinofanirwa kunge zviri zviridzwa uye nzira yekurumbidza Mwari, zvese zvatinosarudza, sarudzo, kugona, ungwaru, Kugona Mwari anoda kuti irondedzere kurumbidza nekukudzwa kwaari, saka, Mwari haana kusika chero munhu kuti azviraramire iye ega, asi Mwari uye anofadza Mwari mune zvese zvikamu. Haisi chete Pisarema asi hupenyu hwatinofanira kurarama.
Sezvo taziva zvinorehwa neiri pisarema, zvakakosha kuziva kuti uchishandise riini. Pane dzimwe nguva shoma dzekuti pisarema rinogona kushandira chinangwa kwauri. Zuva rega rega rakanyanya kukodzera kushandisa iri pisarema, uye nguva yese yaunonzwa Mwari yakakodzerwa nerumbidzo yako yakadzika.
Ndirini pazvinonyanya kuitika muhupenyu hwako uye iwe unoziva zvekuita.
Kana iwe uchishuva zvakanyanya kuvepo Kwake munguva yako yakanyarara
Kana iwe uchida iwe haufungi kurumbidza, iwe unonzwa sekunge kumuimbira rumbidzo kwaari
PISAREMA 150 KUNYENGETera
Kana iwe uri mune chero mamiriro ezvinhu akanyorwa pamusoro kana kupfuura, ipapo aya ane simba mapisarema 150 minyengetero ndeye iwe:
Ishe, ndinotenda rudo nekugadzira kweupenyu hwangu; ndapota gamuchirai moyo wangu wekutenda muzita raJesu.
Ishe Jesu, ini ndinogona kunge ndisina kana chikonzero chekurumbidza, asi nekuda kwesimba renyu rinoshamisa kuhupenyu hwangu uye nezvese zvakandikomberedza, ndinopa zvese zvangu kuti ndikurumbidze,
Tenzi, Jesu sezvandinoda kuti ndikurumbidzei regai zvese zviri mukati nokunze kwandiri zviteerere kurumbidzwa kwako uye zvinondibatsira kuti ndikurumbidzei mukubwinya kwako kukuru.
Previous nyayaMapisarema 90 Zvinoreva Ndima Ndima
inoteveraMapisarema 6 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
30 Ndima dzeBhaibheri Dzinokurudzira